မိန်းကလေးချင်းမို့ လက်တို့ပြောရဦးမယ်။ ( အပိုင်း ၁) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း Tampon လေးအကြောင်း
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အတူ မိန်းကလေးတွေလစဉ် ရာသီလာတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာလည်း စိတ်ညစ်စရာသိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ ရာသီလာရင်းနဲ့ပဲ အလုပ်သွားကြတယ်။ အားကစားလုပ်ကြတယ်။ နောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့တစ်ခုက ရာသီလာစဉ် ရေကူးကြတယ်။ ပင်လယ်သွားကြတယ်။
Tampon ဆိုတာ ပြင်သစ်စကားလုံး Tampion ကဆင်းသက်လာပြီး အဓိပါယ်အနေနဲ့ အပေါက်ဝတစ်ခုကို ပိတ်ဆို့တဲ့ ပစ္စည်းလို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ရာသီလာစဉ် ရာသီသွေးတွေ စုပ်ယူထားနိုင်တဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်ထားရတဲ့ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းပါပဲ။
ခုနကပြောသလို တစ်လတစ်ခါရာသီလာတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်၊ ရေကူးတဲ့အချိန်၊ အခြားရေဆော့ကစားတဲ့အချိန်(ဥပမာ_ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို သင်္ကြန်လိုအချိန်မျိုး) မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်မယ်ဆို မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ရာသီလာလို့ ရေမကစားရဘူးဆိုတာမျိုး မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။
* စသုံးမယ်ဆိုသိထားသင့်တာတွေက ဘာတွေလဲ?
ချစ်ညီအစ်မတို့အနေနဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်ပြီးသုံးရတယ်ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။
အမျိုးအစား( ၂) မျိုးရှိပါတယ်။ ထည့်တဲ့အတံ( Applicator ) ပါတာ နဲ့ မပါတာပါ။ စသုံးမယ်ဆို Applicator ပါတာ အရင်သုံးကြည့်ပါ။ ထည့်ရလွယ်လို့ပါ။
နောက်တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့က Flow လို့ခေါ်တဲ့ ရာသီ အနည်းအများ။ ရာသီ ပထမ (၂) ရက် ရာသီများတဲ့ရက်မှာသုံးဖို့ဆို * Heavy Flow* ရာသီနည်းတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရက်တွေ သုံးဖို့က *Light Flow* တစ်ချို့ကလည်း Heavy Flow ဟာ နဲနဲပိုပြီး နေရခက်တာမို့ Light flow ကို မကြာခဏလဲသုံးတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
ရာသီအရမ်းများတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ Heavy flow သူံးတာတောင် အပြင်လျှံထွက်တာဖြစ်တတ်လို့ လစဉ်သုံး ဂွမ်း ( Sanitary pad) နဲ့ Tampon ကို တွဲသုံးကြပါတယ်။
* Tampon ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ?
အရင်ဆုံး လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေးပါ။ အနေအထားကတော့ ရိုးရိုးအိမ်သာဖြစ်ပါက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ဖြစ်စေ ၊ ဘိုထိုင်ဖြစ်ပါက ခြေထောက်၂ချောင်း ကား၍ ဖြစ်စေထိုင်ထားပေးပါ။
မိန်းမကိုယ်အဝကိုရှာပါ။ အရှေ့ဆုံး ဆီးလမ်းကြောင်းရဲ့ နောက်နားမှာရှိတတ်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်အဝ သန့်စင်စေရန် Tissue အသန့်နဲ့သုတ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Tampon အလယ်ကို လက်ညိုး ၊ လက်မနဲ့ ကိုင်ပါ။ Tampon အဆုံး ကို လက်ညိုးနဲ့ ထိန်းထားပါ။
ကြိုးပါတဲ့ ဘက်ကိုအပြင်မှာထားပြီး Tampon ထိပ်ကို မိန်းမကိုယ်ထဲ ရောက်အောင်ထည့်လိုက်ပါ
ခုနက လက်ညိုးနဲ့ကိုင်ထားတဲ့ ထည့်တဲ့အတံ ( Applicator) ငို ဖိချလိုက်ပါ။ ဒါဆို Tampon က အထဲကိုနေရာတကျရောက်သွားပါပြီ။
ပြီးမှ Applicator ကို အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။
Tampon ကို ၄နာရီခြားတစ်ခါလဲလှည်ပေးမှ ပိုးမဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်တဲ့ အချိန်မှာလဲ ကြိုးစလေးဆွဲလိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူထွက်လာမှာပါ။
Tampon အကြောင်းလေး စုံပြီထင်ပါတယ် ချစ်တို့ရေ။ Tampon နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆ မှားတွေကတော့ ဆက်ရန် ရှိပါသည်လို့။